Latest – Zawgyi Daily
Daily News , Latest
၂-၄-၂၀၂၀ ရက်မှ ၈-၄-၂၀၂၀ ရက်အထိ တစ်ပါတ်စာ ၇ ရက်သားသမီးဟောစာတမ်း
Zawgyi April 2, 2020 April 6, 20200comment
ဗေဒင်ဟူသည်မှာ မာဂဓ(ပါဠိ)ဝေဒ (သင်္သကရိုဋ်ဘာသာ ဟိန္ဒူနဂရီဗေဒ)= သိခြင်း နှင့် အင်္ဂ-အင်္ဂါ = ဖြစ်ခြင်း တို့ ပေါင်းစပ်၍ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ဝေဒင်္ဂမှ ဆင်းသက်လာသည်။ ဝေဒင်္ဂသဒ္ဒါသည် ဗေဒ၏ အင်္ဂါဖြစ်သော ကျမ်းကို ဆိုရာ၊ ယင်းတွင် သိက္ခာ၊ ကပ္ပ၊ ဗျာကရဏ၊ ဆန္ဒ၊ ဇောတိသတ္ထ၊ နိရုတ္တိကျမ်းများ ပါဝင်သည်။ ဝေဒင်္ဂမှ သင်္သကရိုဋ်ဘာသာသို့ ရွေ့လျော၍ ဗေဒင်္ဂ ဖြစ်လာသည်။ ဗေဒင်္ဂမှ မြန်မာဘာသာဖြင့် ဗေဒင်ဟူသော ဝေါဟာရ ဖြစ်လာသည်။ ဝေဒင်္ဂတွင် ပါဝင်သော ဇောတိသတ္တကား ဗေဒင်ပညာပင် ဖြစ်လေသည်။ ဝေဒ-ဗေဒသဒ္ဒါသည် သိခြင်းအနက်ကို ဆိုသောကြောင့် ဗေဒင်ပညာဖြင့် ပစ္စုပ္ပန်၊ အတိတ်၊ အနာဂါတ် အကျိုးအပြစ်တို့ကို သိနိုင်သည်ဟု ရှေးအခါကပင် ယုံကြည်ရင်းစွဲ ရှိခဲ့သည်။ သာမ-ယဇု၊ဣရု […]
Knowledge , Latest
ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့လိုလူတွေကိုတွေ့ရင်တော့ လုံးဝလက်မလွတ်လိုက်ပါနဲ့ !
Zawgyi March 28, 20200comment
လက်မလွှတ်သင့်တဲ့သူ …ခြေညှိုးဟာ ခြေမထက် ရှည်တဲ့ သူတွေ တော်တော်များများ ရှိပါ လိမ့်မယ်။ အဲလိုလူတွေရဲ့ ဖြစ်တတ်တဲ့ စိတ်သဘောထား တွေကို ဖော်ပြ ပေးပါ မယ် နော် …. သူတို့မှာ ကောင်းတဲ့ အချက်တွေ အများကြီး ရှိနေ ပါတယ်။ ယောက်ျားလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ မိန်းကလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် သူတို့လို လူတွေကို တွေ့ရင်တော့ လက်မလွတ် လိုက်ပါနဲ့ …။ သူတို့ဟာ ချစ်ပြီဆိုလဲ သူများနဲ့ မတူသလို မုန်းပြီဆိုလဲ လှည့်ကြည့်တတ် သူတွေ မဟုတ်ပါဘူး …။ ခြေညှိုးက ခြေမထက်ရှည်နေတဲ့ သူတွေဟာ … ၁။ အချစ်ကြီးတယ် အစွဲအလမ်းကြီး ခံစားလွယ်တယ် …။ ၂။ အငြိုးကြီးတယ် ရန်ငြိုးထားတတ်ပါတယ် […]
International News , Latest
အီတလီနိုင်ငံ၌ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကြောင့် သေဆုံးသူဦးရေသည် တရုတ်နိုင်ငံထက် ပိုမိုများပြား
Zawgyi March 21, 2020 April 6, 20200comment
ရောမ မတ် ၂၀ အီတလီနိုင်ငံ၌ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကြောင့် သေဆုံးသူ ၃၄၀၀ ကျော်ရှိ လာခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း အီတလီအစိုးရက ယနေ့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ သေဆုံးမှုနှုန်းသည် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးစတင်ပျံ့နှံ့ခဲ့သည့် တရုတ်နိုင်ငံထက်ပင် ပိုမို များပြားကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကြောင့် ၃၄၀၅ ဦးသေဆုံးခဲ့သည်ဟု အီတလီအစိုးရက မတ် ၁၉ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါသေဆုံးမှုနှုန်းသည် တရုတ်နိုင်ငံ၌ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကြောင့် သေဆုံးသည့်အရေအတွက် ၃၂၄၈ ဦးထက် ပိုမို များပြားကြောင်း သိရသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် အီတလီနိုင်ငံအတွင်း ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ ၄၁၀၃၅ ဦးခန့် မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများက ခရီးသွားလာမှုများ စတင်ပိတ်ပင်ခဲ့ သည့် မတ် ၁၀ ရက်မှစပြီး အီတလီနိုင်ငံအတွင်း ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ သုံးသောင်းခန့်မြင့်တက်လာခဲ့သည်ဟု ဆေးပညာရှင်များက ဆိုသည်။ မတ် ၁၉ […]
Total visitors : 38,941